ပြန်လှည့်ပါ- သင်၏ Shopify သို့မဟုတ် Shopify Plus စတိုး | အလိုအလျောက် အရန်သိမ်းနည်း Martech Zone
ပြန်လှည့်ပါ- သင်၏ Shopify သို့မဟုတ် Shopify Plus စတိုးကို အလိုအလျောက် အရန်သိမ်းနည်း
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 9, 2021 ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 9, 2021 Douglas Karr
ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုက်ရိုက်-စားသုံးသူဆိုက်တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သော ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း ဖောက်သည်တစ်ဦးနှင့် အတော်လေး အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ Shopify တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီခဲ့သည့်ဒုတိယမြောက်ဖောက်သည်ဖြစ်ပြီး၊ ပထမမှာ ပို့ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဖောက်သည်အား ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ဆောက်ကာ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် ကူညီပေးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာကို တီထွင်ဖန်တီးခဲ့သည်။ Shopify Plus အား site သည် ၎င်းကို ၎င်းတို့၏ ERP (A2000) နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ Klaviyo ကျွန်ုပ်တို့၏ SMS နှင့် အီးမေးလ်စာတိုပေးပို့ခြင်းအတွက်၊ helpdesk၊ ပို့ဆောင်မှု၊ နှင့် အခွန်စနစ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဝဘ်ဆိုက်တစ်လျှောက် စိတ်ကြိုက်အင်္ဂါရပ်များအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
Shopify သည် POS အင်္ဂါရပ်များ၊ အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုနှင့် ၎င်းတို့၏ Shop အက်ပ်မှတစ်ဆင့် မိုဘိုင်းလ်စျေးဝယ်ခြင်းကိုပင် ကျယ်ပြန့်သောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက၊ Shopify Plus – သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်မှာပင် အလိုအလျောက် အရန်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်း မရှိပါ။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်၊ သင့်အတွက် နေ့စဥ်အရန်ကူးယူမှုများကို ဂရုစိုက်ပေးသည့် Shopify အက်ပ်မှတစ်ဆင့် အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသည့် အံ့သြဖွယ်ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု ရှိပါသည်။ ပြန်ရစ်.
Shopify Backups ကို ပြန်လှည့်ပါ။
Rewind ကို အဖွဲ့အစည်းပေါင်း 100,000 ကျော်က ယုံကြည်ထားပြီးဖြစ်ပြီး Shopify အတွက် ထိပ်တန်း အရန်သိမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂါရပ်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ ပါဝင်သည်-
သင့်စတိုးကို အရန်သိမ်းပါ။ - ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီမှ ဓာတ်ပုံများမှ မက်တာဒေတာအထိ သင့်စတိုးတစ်ခုလုံးသို့ အရာအားလုံးကို အရန်ကူးပါ။
အချိန်နှင့်ငွေကိုချွေတာပါ - Manual CSV မိတ္တူများသည် အချိန်ကုန်ပြီး ရှုပ်ထွေးသည်။ ဒေတာလုံခြုံရေးကို သတ်မှတ်ပေး၍ မေ့သွားသည်ဖြစ်စေ သင့်ဒေတာကို အလိုအလျောက် အရန်ကူးပေးသည်။
မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အရေးကြီးဒေတာကို ပြန်လည်ရယူပါ။ – ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခု၊ buggy အက်ပ် သို့မဟုတ် malware သည် သင့်အောက်ခြေစာကြောင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုပါစေနှင့်။ Rewind သည် သင့်အား အမှားများကို ပြန်ပြင်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းသို့ လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်စေပါသည်။
သင့်လက်ချောင်းထိပ်တွင် ဗားရှင်းမှတ်တမ်း - လိုက်လျောညီထွေရှိ၍ စာရင်းစစ်ရန် အသင့်ရှိနေပါ။ လုံခြုံပြီး အလိုအလျောက် ဒေတာ အရန်သိမ်းဆည်းခြင်းမှတစ်ဆင့် စိတ်၏အေးချမ်းမှုသည် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော အပြိုင်အဆိုင် အားသာချက်ဖြစ်သည်။
Rewind Backups ဖြင့် Shopify ကို ဘယ်လို Backup လုပ်မလဲ။
ဤသည်မှာ ပလက်ဖောင်း၏ ဗီဒီယိုအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။
သင့်ဒေတာကို အဝေးမှ အလိုအလျောက် သိမ်းဆည်းပြီး လုံခြုံစွာ ကုဒ်ဝှက်ထားပါသည်… ၎င်းသည် သင်စျေးနှုန်းတက်ဂ်ကို မတင်နိုင်သော တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ တကယ်တော့၊ Rewind ၏စျေးနှုန်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ပြန်ရစ်ခြင်းသည် မက်တာဒေတာအပါအဝင် စဉ်ဆက်မပြတ် အရန်သိမ်းခြင်းကို ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။ ပုံတစ်ပုံတည်းမှ သင့်စတိုးတစ်ခုလုံးသို့ မည်သည့်အရာကိုမဆို ပြန်လည်ရယူပါ - အရာအားလုံး အဆင်ပြေသွားသည့်နေ့စွဲကို ရွေးချယ်ပြီး နှိပ်ပါ။ restore!
နှင့် ပြန်ရစ်သင့်အပြင်အဆင်၊ ဘလော့ဂ်များ၊ စိတ်ကြိုက်စုဆောင်းမှုများ၊ ဖောက်သည်များ၊ စာမျက်နှာများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ထုတ်ကုန်ပုံများ၊ စမတ်စုဆောင်းမှုများနှင့်/သို့မဟုတ် သင့်အပြင်အဆင်များကို ပြန်လည်ရယူရန် ရက်စွဲကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
7 ရက် အခမဲ့ အစမ်းသုံးခြင်းကို စတင်ပါ။
ထုတ်ဖော်ချက်- ကျွန်ုပ်တို့သည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူဖြစ်သည်။ ပြန်ရစ်, Shopifyနှင့် Klaviyo ဤဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ တွဲဖက်လင့်ခ်များကို အသုံးပြုနေပါသည်။
Tags: backup လုပ်ထားshopify ဘလော့ဂ်ကို အရန်သိမ်းပါ။shopify စုဆောင်းမှုများကို အရန်ကူးထားသည်။shopify ပုံများကို အရန်သိမ်းပါ။shopify ထုတ်ကုန်များကိုအရန်ကူးပါ။shopify စတိုးဆိုင်ကို အရန်သိမ်းပါ။shopify အပြင်အဆင်အရန်ကူးဘယ်လိုshopify ကို ဘယ်လို backup လုပ်မလဲ။shopify plus ကို ဘယ်လို backup လုပ်မလဲ။ပြန်လှည့်shopifyShopify Plus အား